Voalohany daty dia mety ho hanova ny fiainantsika. Fantatro fa raha miomana ianao ho iray amin'izao fotoana izao, Angamba aho vao nanao ny vavoniny Atsimbadiho, ary ny miala tsiny aho! Ny fomba tsara indrindra mba hiditra ao amin'ny daty voalohany dia ny aina, ka manadino ny fiainana manontolo-manova endrika. Fa tsy, aoka ny hifantoka amin'ny resaka.
Imbetsaka, isika dia mihevitra ny daty voalohany toy ny asa tafa sy dinika, izay azo antoka fa mametraka fara-tsy toe-po tanteraka mitarika ny fahafinaretana, sy ny fanehoan-kevitra mahazatra indrindra ny asa resadresaka dia nervousness, marina? Rehefa natahotra izahay, indraindray isika dia manadino ny tena zava-dehibe toy ny fifampiresahana fitaovana ampiasaina: mihaino.
Mety ho toa tsotra, saingy Mahagaga sparse eto amin'ity izao tontolo izao. Tsy mifantoka be amin'ny fanomanana ny fisainana fanamarihana na tonga lafatra lahateny izay tsy mitandrina ny tanteraka fifantohana amin 'ny hafa. Efa nandre be dia be ny lehibe-iray liners, ary tiako mampihomehy ry zalahy, Ahoana kosa ny amin'ny lehilahy izay raha ny marina dia mihaino izay lazainao? Tsara, Izy no mpiandry. Raha ny mampihomehy, koa, Efa zava-dehibe dia namely ny jackpot.
Ny lehilahy ny vehivavy iray te mihaino, koa! Aho fa tsy miresaka momba ny faniriana handre ny tenin'i fotsiny hoy izy, na izany dia manakiana dingana voalohany. Raha ny marina mihaino ny teniny, ny feo, ny vatany teny, sy ny zavatra nataony. Ny vehivavy mazàna mitandrina ny tsara ireo zavatra ireo, fa amin'ny daty voalohany, tratry ny ananany izany isika matetika mifantoka amin'ny tenantsika (ny fitafiana, ny volony, sakafo ao amin'ny nifiny, Iza firenena, ary ny lokomena reapplications) fa adinontsika ny hoe nahoana isika no tena misy ianao.
Mihaino ny daty dia saika azo antoka mba hanampiana ny resaka fikorianan'ny. Bad mihaino fahaiza-manao, Nitendry A toetrany? Ity misy raikipohy:
1. Fanontaniana: Raha miresaka momba ny daty adidy na asa tombontsoa manokana izay tsy mahatakatra, na baiko zavatra eny amin'ny sakafo ianao mbola tsy nandre ny, Tsy mahatsiaro ho adala raha ametrahantsika fanontaniana. Anontanio izy. Ny olona tia ny manazava ny zavatra fantany be dia be momba ny, ary ianao Feno ny daty ho manam-pahaizana manokana, na izany eo amin'ny fiara na ny milina sushi. Iza no tsy te-hahatsapa toy ny manam-pahaizana? Matetika isika miresaka betsaka kokoa momba ny firehetam-po, ka ianao mahazo ny mahafantatra fa olona amin'ny fomba manan-danja.
2. Pause: Ny famelana ny daty ny mahavita ny fotoana na ny heviny no tsara tarehy fitsipika - ary afaka manaporofo sarotra, rehefa faly ianao na natahotra - fa nanao izany dingana iray lavidavitra tena afaka manome vaovao. Fomba iray lehibe manao izany dia naka ny sip ny rano ho toy ny olona izay nahavita ny eritreritra. Manome ny olona iray fahanginana mba hameno, ary maro ny fotoana hahafantatra bebe kokoa momba azy ireo avy amin'ireo inclusions.
3. Miombona alahelo: Angamba izy vao avy ny mari-pahaizana, Na mety ho ny fisondrotana. Eritrereto ny fomba mety tsapanao amin 'izany toerana. Fa angamba ianao maniry ny hiresaka momba ny toerana tena kilasy, izay tianao hatao any an-tsaha, na ny tetikasa ianao mba niasa tamin'ny mananika ny tohatra. Ary manana fanontaniana lehibe. Izany dia fotoana izay eritreritra feno fitiavan-tena dia afaka manaporofo amin'ny tena manampy ny fianarana momba ny olon-kafa.
4. Avereno: Raha toa ka miahiahy izany ianao, ary natahotra fa manana broccoli niraikitra tao ny nify, ary vao tsy afaka hifantoka amin'ny tsipiriany momba ny asa raha mbola mahatsapa ho an-jambany ny voalamina tsara ao amin'ny kitapom-bola, farafaharatsiny miezaka ny haka amin'ny teny manan-danja. Niteny ve izy hoe angona teny? Ankehitriny ianao dia afaka mametraka fanontaniana mikasika izay karazana tahirin-kevitra, Raha izany no zavatra tiany, na raha mampiasa faobe dia be kafeinina ho tafavoaka velona izany. fa ny marina, hanadino ny voalamina tsara rehefa afaka, ary mangataka aminy fotsiny!
Mazava ho azy, fametrahana fanontaniana mikasika ny daty ny biby(s) dia soso-kevitra. Tsy biby tia? Taratasim-bola, mba miangavy re. Izany no lazaiko amin'ny nihomehy ireny (ary ny karazana zava-dehibe.)
Ankafizo ny daty voalohany, mitonia, sy miala voly! Tsarovy fotsiny mihaino. Enga anie ny fiainanao raha ny marina fanovana, fa Hey, tsy misy fanerena.